मनकारी डाक्टरहरूले बचाएकी २४ वर्षीया लाली - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ मनकारी डाक्टरहरूले बचाएकी २४ वर्षीया लाली
मनकारी डाक्टरहरूले बचाएकी २४ वर्षीया लाली
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७८ कात्तिक ३० गते, ०९:४० मा प्रकाशित
लाली चौधरी निको भएपछि । तस्विरहरुः नवराज वाग्ले/हेल्थआवाज
यतिमै शल्यक्रिया गर्न आफैमा चुनौतीपूर्ण र खतरापूर्ण कार्य थियो । तर, डा. गहनाको टिम बिरामीको जीवनलाई केन्द्रमा राखेर रिस्क लिएरै भएपनि शल्यक्रिया गर्न तयार भयो । राति १० बजे डा. गहनासहित एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. शुभकल्याण श्रेष्ठ, मेडिसिनका चिकित्सक डा. परशुराम घिमिरेको टोली शल्यक्रिया सुरु ग¥यो । ‘मानिसमा १ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म प्लेटलेस हुनुपर्छ, १ लाखभन्दा तल प्लेटलेस भएको बिरामीलाई शल्यक्रिया गर्नु निकै जोखिमपूर्ण थियो । तर, हामीले जसरी पनि बिरामीलाई बचाउने विकल्प सोचेरै शल्यक्रिया अगाडि बढायौं,’ डा. गहना भन्छिन् ।
शल्यक्रिया अलि लामो भयो । राति पौने एक बजेतिर बल्ल शल्यक्रिया सकियो । बिरामीलाई पोष्टअप वार्डमा सारियो । तर, बिरामी अवस्था जटिल नै थियो । चिकित्सकहरुले हार मानेनन्, निरन्तर प्रयासहरु गरिरहे । अन्ततः ७२ घण्टापछि लालीको स्वास्थ्यमा सुधारका संकेतहरु देखिन् थाले । ‘हाम्रो टिमवर्कको परिणाम बल्ल देखियो, त्यसले धेरै आशाहरु पलाए,’ डा. गहनाले सुनाइन् । ७ दिन आईसीयुमा राखेर उपचार गरेपछि उनलाई जनरल वार्डमा सिफ्ट गरियो ।
अन्ततः लाली २३ कात्तिकमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइन् । उनलाई हेरिरहेका चिकित्सक डा. परशुरामकाअनुसार अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था पूर्णतयाः नर्मल छ । ‘लालीको अवस्था सबै नर्मल छ । ट्रमाटोकी केसबाट ग्रुजिएकाले मानसिक अवस्था गाह्रो हुने हुन्छ । तर, उनमा त्यसको असर पनि छैन,’ उनले भने, ‘ट्युब राखेका कारण बोल्नमा केही समस्या छ । त्यो पनि ५—७ दिनमा ठीक हुन्छ ।’
अस्पतालका सिईओ डा. रामकुमारकाअनुसार लालीको रिस्क लिएर शल्यक्रिया गरिएको हो । ‘हामीले रिस्क लिएर उहाँको शल्यक्रिया ग¥यौं ।’ अझ केही अस्पतालले त पैसा तिर्न नसक्ने भनेर लालीलाई आईसीयुबाट निकालेर अर्को अस्पतालमा पठाइदिएका थिए । तर, करुणा अस्पतालले भने लालीको शल्यक्रिया निःशुल्क गरिदिएको हो । ‘हामीले औषधीबाहेक सबै कुरा निःशुल्क गरिदियौं,’ डा. राम भन्छन्, ‘प्राइभेटले पैसाका लागि मात्रै काम गर्नुभएन । २—४ घण्टा हामीले आफ्नो ज्याला नलिदा कोही बिरामी बाँच्छ भने किन नगर्ने ?’ ल्याब परीक्षण र अन्य कुराका लागि पनि डा. रामले सहयोग जुटाइदिए । ‘नत्र हामी स्टाफहरुबाटै ५—५ सय जम्मा गरेर भएपनि उपचार खर्च तिरिदिने सोचमा थियौं,’ यी युवा चिकित्सक भन्छन्, ‘तर, सहयोग जुट्यो, बिरामीलाई राम्रो भयो । हामी खुसी छौंं ।’
सोमबार हेल्थआवाज प्रतिनिधीसँग भलाकुसारीका क्रममा लाली र उनका श्रीमान बुद्धिराम चौधरीको अनुहारमा खुसी फुलिरहेको थियो । ‘सबै डाक्टर रातभर खटेर मलाई बचाउनुभयो,’ लालीले सुनाइन्, ‘बाँचिदैन जस्तो लागेको थियो । नयाँ जीवन पाए ।’ उनका श्रीमान बुद्धिराम अस्पताल र मनकारी चिकित्सकहरुको टिमले आफ्नी श्रीमतीलाई नयाँ जीवन दिएकोमा अनुग्रहित थिए । ‘उहाँहरुको सबैको सहयोगका लागि निकै आभारी छु,’ उनले भने, ‘पैसा र पावर हुनैपर्ने रहेछ । पावर र पैसा भएको भए यति धेरै अस्पताल चहार्नु पर्दैन्थ्यो होला ।’ जे भएपनि धनगढीको जीविकोपार्जन मात्रै गर्न सक्ने परिवारका उनी जीवनसाथीलाई सन्चो भएकोमा फुंरुग छन् ।
हेल्थआवाजसँग श्रीमती बिरामी भएपछि ब्यहोर्नु परेको समस्या सुनाउँदै बुद्धिराम, उनकी लाली र आफन्त
यतिकैमा उनका जेठानका सहपाठी राकेश महर्जनसँग सम्पर्क भयो । राकेशकी क्लासमेटका थिइन्, करुणा अस्पतालका सञ्चालक डा. रामकी बहिनी । राकेशले डा. रामकी बहिनीसँग समस्या बिसाए । डा. रामले बिरामीको करुणा अस्पतालले उपचारको जिम्मा लिइदिने बताए । त्यसपछि १३ कात्तिकको राति २ बजे अस्पताल चहार्दा—चहार्दै हैरान भएकी लालीलाई लिएर बुद्धिरामले करुणा अस्पताल बुढानिलकण्ठ पुगे । अस्पतालले तत्कालै बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेर आईसीयुमा राख्यो र उपचारका प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
७२ घण्टापछि बल्ल सुधार देखिन थाल्यो । शरीरको संक्रमणको शक्ति घटेपछि विभिन्न रोगले समात्ने हुन्छ । हामीलाई पनि ७२ घण्टापछि सुधार आएपछि आशा लाग्न थाल्यो । त्यसपछि प्रेसरको औषधी दिनु परेन् । आफै श्वास फेर्न सक्ने भइन् । खाना खाने भइन् । सात दिन त आईसीयुमै बस्नुप¥यो । वार्डमा सिफ्ट गरेपछि दालहरु खान सक्ने भइन् । प्लेटलेसहरु माथि आयो, रातो रगत देखिन थाल्यो । त्यसपछि हामीले डिस्चार्ज गर्यौं ।